အင်ဂျင် Stand နှင့် ပံ့ပိုးမှု
Air Hydraulic Bottle Jack ၊
ATV နှင့် ဆိုင်ကယ် ပြုပြင်ရေး ကိရိယာများ
Wheel Dolly&Vehicle Positioning Jack
တစ်နှစ်ပတ်လုံး ပင်စည်မှာ ဖုန်မှုန့်တွေ စားရင် ဘာလုပ်ရမလဲ။
admin မှ 22-05-11 ရက်နေ့တွင်
လူတိုင်းသည် jacks နှင့် အလွန်ရင်းနှီးကြရမည်ဖြစ်သော်လည်း ပြာကိုစားရန်အတွက် လူများစွာ၏ jacks များကို ပင်စည်ထဲတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ထည့်ထားသင့်ပြီး jack ပင်မရှိသောကြောင့် လူတော်တော်များများသည် jack ကိုအသုံးပြုပုံအဆင့်ဆင့်ကို မသိသောကြောင့် လိုအပ်ပါသည်။ Chenghua Manufacturing အတွက် ကြိုတင်သတိထားနည်းများကို သင်ကြားပေးသည်...
ဟိုက်ဒရောလစ်ဂျက်တွင် Pascal's Law ကိုအသုံးပြုခြင်း။
21-11-05 ရက်နေ့တွင် admin မှ
ဟိုက်ဒရောလစ်ဂျိုက်သည် “လေးနှစ်ဆွဲတစ်ထောင်ကြောင်” ဟူသော စကားလုံးကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ဖော်ပြသည်။သေးငယ်သော jack သည် ကြောင်လေးတစ်ဒါဇင်ထက်မပိုသော အလေးချိန်၊ သို့သော် ၎င်းသည် တန်ချိန်အနည်းငယ် သို့မဟုတ် တန်ရာနှင့်ချီသောလေးလံသောအရာများကို သယ်ဆောင်နိုင်သည်။ဒါဟာ တကယ့်ကို မယုံနိုင်စရာပါပဲ။ဒါဆို အထဲမှာ ဘာတွေလဲ...
21-09-30 ရက်နေ့တွင် admin မှ
သင့်ကားကို မြှင့်တင်ရန် သေးငယ်သော စွမ်းအားကို အဘယ်အရာက အသုံးချသနည်း။မှန်ပါသည်၊ ၎င်းသည် အခြေခံ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လည်ပတ်မှုများကို လုပ်ဆောင်ရန် ကားနှင့်အတူ သယ်ဆောင်သွားနိုင်သည့် Jack တစ်ခုဖြစ်သည်။သို့သော်၊ ဤအိတ်ဆောင် jack အပြင်၊ စျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သော jack အမျိုးမျိုးရှိသည်။Jack များကို အင်အားအမျိုးအစားအလိုက် ခွဲခြားနိုင်သည်...
တရုတ်နိုင်ငံ ဂျိုက်ကာဈေးကွက် သုတေသနနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မဟာဗျူဟာအစီရင်ခံစာ
admin မှ 21-09-23 ရက်နေ့တွင်
Jack သည် အလွန်အသုံးများသော အပေါ့စားနှင့် သေးငယ်သော lifting ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး အသုံးချမှုများစွာပါဝင်ပါသည်။၎င်းသည် ကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ပင်မဓာတ်လှေကားကိရိယာသာမက ဆောက်လုပ်ရေး၊ မီးရထားလမ်း၊ တံတားများနှင့် အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအတွက် အသုံးချပရိုဂရမ်များစွာပါရှိသည်။ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ ...
BOTTLE Jack ပေးသွင်းသူ
admin မှ 21-06-26 ရက်နေ့တွင်
မနေ့ညက Lawrence Road အနီးရှိ Jack in the Box တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဤရူးသွပ်ဖွယ်ဖြစ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တွင် မေးခွန်းအနည်းငယ်ရှိပါသည်။မောင်းသူမဲ့ဝန်ထမ်းများသည် စစ်သွေးကြွဖောက်သည်များနှင့် ဆက်ဆံရမည်ဟု ထင်ရသည်။Jamie Mayberry (KFDX အရ Amanda Mullins ကဲ့သို့ အခြားသော နာမည်များနှင့်အတူ) သည် နှောင်းပိုင်းတွင် ပါဝင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်...
admin မှ 21-05-17 ရက်နေ့တွင်
由于我公司正规网络推广逐步增多，近期发现，很多虚假信息在各大网站频繁出现，全部盗用我公司网站的框架结构、文字内容及图片，给我公司造成极坏影响。 现我公司严正申明： http://www.cn-jiaye.com为有效有效有效有效有效有效有效有效有效一致的的一致的的一致的一致一致属于的的属于属于属于属于属于属于属于属于属于属于违法属于属于盗用侵权侵权侵权侵权侵权侵权侵权侵权侵权侵权责任责任责任责任责任责任责任责任责任责任责任责任责任
20-12-03 တွင် admin မှ
Automechanika Shanghai သည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ မော်တော်ယာဥ်လုပ်ငန်း၏ အရေးကြီးဆုံးပွဲဖြစ်သည်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်အကျပ်အတည်းဖြစ်နေသော်လည်း Automechanika Shanghai သည် ကုန်စည်ပြပွဲပြက္ခဒိန်တွင် အမြဲမပြတ်ရှိနေပါသည်။နိုင်ငံပေါင်း 140 ကျော်နှင့် ကုမ္ပဏီပေါင်း 6000 ကျော်သည် ဒီဇင်ဘာလ2ရက်မှ5ရက်နေ့အထိ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။ကြာသည်...
20-11-26 ရက်နေ့တွင် admin မှ
1. ကြောင်ခြောက်ကို အသုံးပြုသောအခါတွင် ပြားချပ်ချပ်လေးထားရန် လိုအပ်ပြီး ဂျိုက်နာခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် သစ်သားအခြောက်ကို အောက်ဖက်တွင် ကပ်ထားနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း ချော်ထွက်ခြင်းဖြစ်စဉ်သည် ယုန်များကို ရှောင်ကြဉ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို ပျက်စီးစေပါသည်။2. Dry Jack ကို တပ်ဆင်ပြီးနောက်၊ c ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို jack up လုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
20-11-21 ရက်နေ့တွင် admin မှ
Haiyan Jiaye Machinery Tools Co., Ltd. သည် Xitangqiao မြို့၊ Haitang စက်မှုပန်းခြံတွင် တည်ရှိသည်။ကုမ္ပဏီသည် အဆင့်မြင့်စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်နှင့် အဆင့်မြင့်နည်းပညာများရှိသည်။“အိပ်မက်ထက်ကျော်လွန်သော ဝါသနာ” နှင့် “သမာဓိ၊ ကျေးဇူးသိမှု၊ ထိရောက်မှု၊ အဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်မှု” ဟူသော ခိုင်မာသောယုံကြည်ချက်အောက်တွင်၊
အလျားလိုက် ဟိုက်ဒရောလစ်ဂျိုက်ကို သံချေးမတက်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။
20-09-11 ရက်နေ့တွင် admin မှ
Jack များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အတော်လေးအသုံးများသော သေးငယ်သော lifting ပစ္စည်းဖြစ်သည်။စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ လူများ မော်တော်ကားဝယ်ယူမှု ပိုများလာကာ မော်တော်ကားများအတွက် အလျားလိုက် Jack များသည်လည်း အလွန်ရေပန်းစားလာပါသည်။အလျားလိုက် Jack များသည် အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း အမျိုးမျိုးသော ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်နိုင်သည်။အထူးသဖြင့် သံချေးတက်ခြင်းသည် ယနေ့ခေတ်တွင် အဖြစ်များသော ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ...
အလျားလိုက် Jack ကိုရွေးချယ်ရန် အကြောင်းရင်း3ခု
admin မှ 20-09-06 ရက်နေ့တွင်
Jack အမျိုးအစားများစွာလည်းရှိသည်။ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကယ်ဆယ်ရေးသမားများ အသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားများကိုသာ ဆွေးနွေးထားပါသည်။သခင်က သူ့ကိုယ်ပိုင် အလျားလိုက် Jack ကို ယူလာပေးတယ်။အထက်ပါ နှစ်ခုစလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သော တာဝန်မှာ ...
အလိုအလျောက် ပြုပြင်ရေး ကိရိယာများနှင့် စက်ပစ္စည်း- ပါဝါကိရိယာများ
admin မှ 20-08-22 ရက်နေ့တွင်
အလုပ်ရုံ၏နေ့စဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းတွင် အသုံးများသည့်ကိရိယာတစ်ခုအနေဖြင့်၊ သေးငယ်သောအရွယ်အစား၊ အလေးချိန်ပေါ့ပါးမှု၊ သယ်ဆောင်ရအဆင်ပြေမှု၊ အလုပ်ထိရောက်မှု၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းသော၊ ကျယ်ပြန့်သောအသုံးပြုမှုပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် အလုပ်တွင်တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်။လျှပ်စစ်ထောင့်ကြိတ်စက် လျှပ်စစ်ထောင့်ကြိတ်စက်များသည် o...
12နောက်တစ်ခု >>> စာမျက်နှာ ၁/၂
အထူးအသားပေး ထုတ်ကုန်များ - ဆိုက်မြေပုံ
ပြုပြင်ရေးကိရိယာများ,3တန် ဟိုက်ဒရောလစ်ဂိုဒေါင် Jack, မော်တော်ကား ကိရိယာများ, ဟိုက်ဒရောလစ်ဂိုဒေါင် Jack3တန်, ဟိုက်ဒရောလစ်ဂိုဒေါင် Jack, တွားသွား,
လိပ်စာ- အမှတ် 699 Yintan လမ်း၊ Haiyan စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဇုန်၊ Jiaxing၊ Zhejiang ပြည်နယ်၊
ဖုန်မှုန့်တွေ စားရင် ဘာလုပ်ရမလဲ...
jacks တွေကို လူတိုင်းသိသင့်ပါတယ်...
Hydr တွင် Pascal's Law ကိုအသုံးပြုခြင်း...